Ungawuhlela kanjani umngcwabo ngesikhathi nangemva kweCovid 19 - Sendoff Funeral App
Ungawuhlela kanjani umngcwabo ngesikhathi nangemva kweCovid 19
Imingcwabo ishaywe kanzima yiCoronavirus. Ngokufa okuningi kangaka ngenxa yaleli gciwane, ukusho ukuthi akukaze kubaluleke kangakanani, umbuzo ukuthi ungawuhlela kanjani umngcwabo ngesikhathi seCovid-19? Ungakulawula kanjani ukusatshalaliswa komphakathi, ukuvinjelwa kwemibuthano emikhulu futhi ube nomkhosi ohloniphayo nohloniphayo othandekayo wakho? Ungabuka ividiyo ngaphansi kwemizuzu engu-3 noma uthathe isikhathi esincane ukuze ufunde okuthunyelwe:
Kumakhasimende ethu amaningi ngalesi sikhathi, impendulo iwukuba nomngcwabo ohlanganisiwe noma umngcwabo obonakalayo
Umngcwabo obonakalayo uhanjelwa kuphela ngabantu abadingekayo ukuze inkonzo yenziwe. Wonke umngcwabo usakazwa bukhoma ukumema ngekhamera kanye nemakrofoni noma isixazululo se-telepresence esibekwe eSontweni / eMosque / Shul futhi sisakazwa singena kwi-inthanethi. Uma kunikezwe izingqinamba ezivelile ngemuva kobhubhane lweCovid- 19 oluphathelene nemikhawulo yokuhamba nemibuthano emikhulu kungenzeka ukuthi lezi zinhlobo zemingcwabo zivame ukwanda. Lapho uhlela umngcwabo obonakalayo, udinga ukubheka okulandelayo:
Indawo ye-nkonzo yomngcwabo ibaluleke kakhulu lapho ukhetha umngcwabo obonakalayo noma umngcwabo ohlanganisiwe.:
Udinga ukubheka ukufakwa kwekhamera (s) nemakrofoni (s) ukuqinisekisa umbono wekhwalithi enhle nama-acoustics.
Amakhamera azodinga ukukhanyiswa okwanele kwendawo esatshalaliswa
Kufanele kube nokuxhumeka kwe-inthanethi okuthembekile, okusheshayo. Siphakamisa ukuthi kungabi ngaphansi kwe-20MB / s isivinini sokulayisha.
Ungakhohlwa izindaba ezinjengalezi njengamandla anele noma izandiso zamandla nomoya omncane wezinto zokusebenza (umsindo omkhulu ungakhala)
DIY noma Pro?:
Ukukhetha inketho yobuchwepheshe kungakongela isikhathi nemali lapho uhlela umngcwabo obonakalayo. I-Sendoff inomnikelo womngcwabo ongawukhetha. Uma ufuna ukukwenza ngokwakho, kuzodingeka uqinisekise ukuthi lezi zindawo ezilandelayo zimboziwe:
Kunezinketho eziningi zemicimbi yokuphupha namuhla. Akubona bonke abafanele noma abalungele lolu hlobo lokusebenzisa. Singaphakamisa ukuthi usebenzise okukodwa kokulandelayo:
Lolu akulona uhlu oluphelelayo kepha wonke la mathuluzi esoftware ahlolwe futhi singakuqinisekisa ukuthi ayasebenza. Ngamunye uzoba nezinzuzo ezithile nokulimazeka kodwa uzosebenza kahle futhi siphakamisa ukuthi u-uing lowo ojwayelene kakhulu naye.
Uzodinga ikhamera enhle nekhamera ukuze ubambe ukusakazwa bukhoma. Kudingeka ukuthi kube nenethiwekhi ukuze kusatshalaliswe okuphakelayo kwevidiyo kuthuluzi le-software elikhethiwe. Imakrofoni enhle yokuqondisa iyadingeka futhi uma unezikhulumi ze-eulogy noma ezinye izinkulumo, kuzodingeka zibe nemakrofoni enamathiselwe kwi-lapel noma kwenye intaba yezingubo ezingabonakali.
Isheduli & Ukulandelana:
Njenganoma yimuphi omunye umngcwabo, kufanele kube nohlelo. Unganamathisela uhlelo kuthuluzi lakho elikhethiwe njengamanothi noma ulithumele nezimemo. Ngokungafani nomngcwabo womuntu, ababekhona abakwazi ukubona konke okwenzekayo ngakho-ke kubaluleke kakhulu ukuphatha uhlelo ngokuqinile. Ukuphumula isikhathi eside phakathi kwezinto zohlelo kungenza ababekhona bazizwe sengathi baxhunyiwe futhi kubangele ukuphazamiseka.
Uzodinga ukusabalalisa isixhumanisi somhlangano, ujoyine imiyalo kanye nohlu “lwemibuzo ebuzwa njalo”. Abantu abaningi abanethezekile ikakhulukazi ngobuchwepheshe futhi kulula ukudideka ngezinketho ezitholakalayo lapho ujoyina umngcwabo obonakalayo. Uma unomuntu olungile ngobuchwepheshe futhi engadingeki ukuphatha eminye imisebenzi yomngcwabo obonakalayo, cabanga ukubabuza ukuthi kulungile yini ukufaka imininingwane yabo kwisimemo njengokuxhaswa kwezobuchwepheshe.
Umngcwabo ohlanganisiwe yinhlanganisela yomngcwabo wendabuko nomngcwabo obonakalayo. Uzoba nokujwayela emisebenzini yomuntu eyenzekayo kodwa futhi uzoba nomsakazo obukhoma womcimbi. Nalu uhlu lwalokho ozodinga ukuhlela:
Hlela umngcwabo noma ukushiswa ekhaya lomngcwabo.
Khetha ibhokisi lomngcwabo noma ibhokisi.
Uma othandekayo wakho eshiswa, khetha i-urn.
Incwadi ISonto / Mosque / Shul yenkonzo.
Hlela izinto zokuhamba zothandekayo wakho nezihlobo zakho.
Phetha imihlahlandlela ethile yenkolo.
Amathuna encwadi namathuna.
Khetha isembatho somuntu omthandayo
I-florist yencwadi nokukhetha ukuhlelwa
Khipha indawo emaphephandabeni afanele
Indawo yokwamukela incwadi
Isithombe seNcwadi / umdwebi wezithombe
Incwadi \_”Ngemuva kwezinyembezi\_” indawo
Inothi lokubonga kubo bonke abasizile
Uma othandekayo wakho eshisiwe, kuzodingeka unqume ukuthi wenzeni ngomlotha wabo
Ungafuna ukubheka “Isikhumbuzo Sokuphila” kulesi sigaba.
Ukukhansela noma yiziphi izinqubomgomo, izinsimbi zezezimali noma izinkontileka eziphethwe ngumthandekayo wakho
Kufanele ukhansele noma yimaphi ama-akhawunti kahulumeni noma amadokhumenti asaphethwe njengamanani nentela, ilayisense lokushayela njll
Dala ifayela lamadokhumenti eliphethe yonke imibhalo, ama-invoice, izaziso zokukhanselwa kwenkontileka kanye nezikweletu ezihlobene nomngcwabo nomuntu omthandayo
Faka isaziso sokufa ne-Master of the High Court (RSA)
Ungafuna ukubheka izinketho zokwelulekwa ngokufelwa. Noma ngabe ucabanga ukuthi ulungile, ukufa komuntu omthandayo kungaba nemiphumela emibi ngokomzwelo.